Port Harcourt: ny ‘setroka mainty matevina’ ao an-tanàndehiben’i Nizeria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2018 5:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, Italiano, 日本語, English
Efa hatry ny ela no saron'ny setroka mainty matevina, miaraka amin'ny vovoka ary mampidi-doza ny fahasalamana izay atahoran'ny olona fa hanimba ny fahasalaman'ny mponina an-tapitrisany na mihoatra i Port Harcourt, foiben'ny indostrian'ny solika Nizeriana .
Nahatonga ny mponina hanadio tsy tapaka ny setroka tamin'ny fiara sy ny fonenany ny rivotra mainty feno poizina ary tsy maintsy nanaovana ny fitafiana fiarovana ho fandraisana fepetra, ka nahatonga ny fahatsiarovan-tenan'ny vahoaka momba ny fahasarotana sy ny fielezan'ity krizy ity izany. Nilaza tamin'ny CNN i Saatah Nubari hoe:
Nampitandrina ny fiantraikan'izany i George Kerley, mpanoratra ho an'ny TheCable hoe:
Raha nilaza ny ahiahiny momba ny krizin'ny tontolo iainana ny mponina manerana ny tanàndehibe dia nanambara ny fandotoan-drivotra ho “hamehana” ny Minisiteran'ny Tontolo Iainana tao Nizeria tany am-piandohan'ny taon-dasa, saingy nanilika ny andraikiny tany amin'ny orinasa mpanodina solitany tsy ara-dalàna sy ny fandoroana kodiarana.
Ity fanilihan'andraikitra ity dia sady tsy nanakana ny setroka mainty no tsy nanadio ny rivotra , ary nanosika ireo mpisera haneho ny hatezerany tao amin'ny Twitter tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny tenirohy #StoptheSoot (Atsaharo ny setroka mainty):
Lasa nivadika ho hetsika ara-tontolo iainana tanteraka mitaky rivotra madio sy tontolo iainana azo antoka manerana ny faritry ny Fanjakana Rivers State ao amin'ny Vinany ao Nizeria ny tenirohy #StoptheSoot tao amin'ny Twitter. Nidina an-dalambe ny vondrona mpanandrateny mba hanao hetsi-panoherana ary nihaona tamin'ny governemantan'ny Fanjakana Rivers.
Nisarika ny sain'izao tontolo izao ny hetsika iray hafa notarihan'ny olom-pirenena avy ao amin'ny Global Shapers Community ao Port Harcourt momba ny loza ara-tontolo iainana ao an-toerana tamin'ny fanangonan-tsonia tany amin'ny Fandaharanasan'ny Firenena Mikambana ho an'ny Tontolo Iainana.
Nanazava i Ebenezar Wikina, mpikambana ao amin'ny vondrona :